Spotify အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - 9Apps
8.6.70.1102 for Android
4.4 | 1,000,000,000+ ထည့်သွင်းရန် | သုံးသပ်ချက်မျာ
ဒေါင်းလုပ် XAPK（37.5MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် Spotify: Listen to podcasts & find music you love
Spotify နှင့်အတူသင်သည်တေးဂီတကိုနားထောင်ပြီးသန်းနှင့်ချီသောသီချင်းများနှင့် podcasts များကိုအခမဲ့ကစားနိုင်သည်။ တေးဂီတနှင့် podcasts များကိုသင်နှစ်သက်ပြီးသီချင်းဆိုပါ။ သို့မဟုတ်သင်၏နောက်အကြိုက်ဆုံးသီချင်း - ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးမှဂီတ, အယ်လ်ဘမ်များ, Playlists နှင့် podcasts အသစ်များကိုရှာဖွေပါ။ •သင်အကြိုက်ဆုံးသီချင်း, သို့မဟုတ် podcast
သင့်အတွက်ဂီတဖွင့်စရာစာရင်းများနှင့်ထူးခြားသောနေ့စဉ်ရောနှောမှုများကိုခံစားပါ။ •သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဖွင့်လိုစာရင်းများကိုပြုလုပ်ပါ။ •ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများနှင့်ဆယ်စုနှစ်များမှထိပ်တန်းသီချင်းများကိုလေ့လာပါ။ •တေးဂီတကိုရှာပါ မည်သည့်စိတ်ခံစားမှုနှင့်လှုပ်ရှားမှုအတွက်ဖွင့်စရာစာရင်းများ
သင်၏မိုဘိုင်း, တက်ဘလက်, ပြဇာတ်, Playstation, Chromecast, TV, Watch Watch နှင့် Myanmar တို့အပေါ်တေးဂီတနှင့်ပိုမိုများပြားသောသီချင်းများကိုနားထောင်ပါ။ Spotify နှင့်အတူတက်ဘလက်။ အယ်လ်ဘမ်များ, ဖွင့်စရာစာရင်းများ, သီချင်းတစ်ပုဒ်များသို့မဟုတ်သီချင်းတစ်ပုဒ်ကိုသင်မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုဂီတအော့ဖ်လိုင်းကိုနားထောင်ပါ။
>> Spotify နှင့်အတူအခမဲ့ဂီတ, စင်ကြယ်သောဖွင့်စရာစာရင်းများ, တေးဂီတ, podcasts အသစ်များ, ထိပ်တန်းသီချင်းများ, ထိပ်တန်းသီချင်းများသို့မဟုတ်သင်အကြိုက်ဆုံးအနုပညာရှင်များအယ်လ်ဘမ်များကိုနားထောင်ပါ။ သင်၏ခံစားချက်နှင့်ကိုက်ညီမည့်နောက်ဆုံးသီချင်းများဖြင့်သင်၏ကိုယ်ပိုင်တေးဂီတဖွင့်စရာစာရင်းများဖန်တီးပါ။
spotify သည်တေးဂီတသည်တေးဂီတကိုဆေးကြောသန့်စင်ခြင်းများပြုလုပ်နိုင်သည်။ အနုပညာရှင်အသစ်များမှတေးဂီတကိုရှာပါ, သင်အကြိုက်ဆုံးအယ်လ်ဘမ်သို့မဟုတ်ဖွင့်သူများကိုလွှင့်ထုတ်ပြီးသင်ချစ်သောတေးသီချင်းများကိုနားထောင်ပါ။
•အခမဲ့ဂီတနှင့် podcasts များသည်လွယ်ကူစွာပြုလုပ်နိုင်သည် - မည်သည့်အမျိုးအစားမှမဆို Playlist, အယ်လ်ဘမ်သို့မဟုတ်ထိပ်တန်းသီချင်းများကိုနားထောင်နိုင်သည် Shuffle Mode ။
သင်၏တက်ဘလက်တွင်တေးဂီတနှင့် podcasts များကိုအခမဲ့နားထောင်ပါ။ •အနုပညာရှင်, podcast, အယ်လ်ဘမ်, အယ်လ်ဘမ်သို့မဟုတ်ဖွင့်စရာစာရင်းတွင်သင်၏အရသာနှင့်ကိုက်ညီရန်နေ့စဉ်ရောနှောခြင်းနှင့်အတူကိုယ်ပိုင်ဂီတအတွေ့အကြုံကိုခံစားပါ။
Spotify Premium အင်္ဂါရပ်များ
ကြော်ငြာပြတ်လပ်မှုမရှိသည့်အယ်လ်ဘမ်, ဖွင့်သူသို့မဟုတ် podcast တစ်ခုကိုနားထောင်ပါ။ Spotify ဖြင့်မည်သည့်စက်ယန္တရားကိုမဆိုမည်သည့်စက်ယန္တရားမှမဆိုဂီတကိုဖွင့ ်. Mobile, တက်ဘလက်သို့မဟုတ်သင့်ကွန်ပျူတာတွင်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုဂီတကိုကစားနိုင်သည်။ •သင်မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုဂီတအော့ဖ်လိုင်းကိုနားထောင်ရန် download လုပ်ပါ။ •နောက်သို့ပြန်သွားပါ သင်၏ထိပ်တန်းသီချင်းများ။ •စိတ်ကြိုက်ဂီတနှင့် podcasts များအပေါ်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအသံအရည်အသွေးကိုနှစ်သက်ပါ။ •တေးဂီတအသစ်ကိုရှာဖွေပါ။ •တေးဂီတအသစ်ကိုရှာဖွေပါ။ Spotify ဖြင့်မည်သည့်အရာနှင့်မတူသည့်ကိုယ်ပိုင်ဂီတအတွေ့အကြုံကိုသင်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
ဂီတအသစ်ကိုရှာဖွေလိုပါသလား ! ကျွန်ုပ်တို့၏ကုလသမဂ္ဂနှင့်အရောအနှောနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့၏ကုလယားသီချင်းများနှင့်အယ်လ်ဘမ်များကိုလေ့လာခြင်းသို့မဟုတ်ကိုယ်ပိုင်ဂီတအကြံပြုချက်များကိုရှာဖွေပါ။
ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် Spotify.com/spotify: http://www.facebook.com/spotify Twitter တွင်ကျွန်ုပ်တို့နောက်သို့လိုက်လော့။ Nielsen ၏အသံတိုင်းတာမှုကဲ့သို့သောစျေးကွက်သုတေသနကိုအထောက်အကူပြုမည့်ဤ app တွင် Nielsen ၏ပရိသတ်တိုင်းတာခြင်းဆော့ဖ်ဝဲလ်တွင်မိတ်ဆက်ပါ။ သင်မပါ0င်လိုပါကအက်ပလီကေးရှင်းချိန်ညှိချက်များအတွင်းတွင်သင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဒစ်ဂျစ်တယ်ပရိသတ်တိုင်းတာခြင်းဆိုင်ရာထုတ်ကုန်များနှင့်သင်၏ရွေးချယ်မှုများအကြောင်းပိုမိုလေ့လာရန်ပိုမိုသိရှိလိုပါက http://www.nielersen.com/digitalPriverprivery သို့ဆက်သွယ်ပါ။
ဘာအသစ်လဲ Spotify: Listen to podcasts & find music you love 8.6.70.1102
5 Secret Spotify Tricks That NOBODY Knows (2020)
How to Play Music Offline with Spotify
How To Play A Radio Station Base On A Song Spotify iPhone
Spotify Group Sessions: How to Use!
Spotify: Music and Podcasts 8.6.66.1238
Spotify: Music and Podcasts 8.6.64.1081
Spotify: Music and Podcasts 8.6.62.1029
WhatsLov: love stickers, GIF & emoji WAStickerApps
Love You Live Wallpaper ❤️ Purple Hearts Themes
Happy Very Very Good 2564
Isaiah tk Myitkyina
Off line နားထောင်လို့ရအောင်လုပ်ပေးပါ ဒေါင်းလိုရဒေါင်းလ့ိုရအောင်လည်းလုပ်သင့်တယ်။